Nezvedu | Zhejiang Jinhuan Chain Kugadzira Co, Ltd.
Zhejiang Jinhuan Chain Manufacturing Co., Ltd. rakaumbwa muna Gumiguru 1993, ari nyanzvi R & D uye kugadzirwa cheni zvebhizimisi. Iyo fekitori inovhara yakazara nzvimbo ye20000 mativi emamirimita, iine yakatarwa zvinhu zveanopfuura mamirioni e30 yuan, anopfuura mazana maviri seti yemidziyo, vanopfuura vashandi ve100 uye wepagore ekugona inokwana anopfuura mamirioni gumi emamita. Iyo "Jinhuan" mhando uye "Jinhong" mhando maketani anogadzirwa neiyo fekitori inotora yenyika matanho (GB) uye epasi rose zviyero (ISO). Izvo zvigadzirwa zvinotengesa mushe pasirese uye zvinotumirwa kuSoutheast Asia, South America, Africa nedzimwe nzvimbo.
Huru zvigadzirwa zvefekitori akateedzana a uye B roller macheni, mudhudhudhu ngetani, yakajairwa uye isiri-akajairwa conveyor ngetani, ndiro cheni, zvekurima michina maketani uye akasiyana akakosha macheni. Mumakore achangopfuura, bhizinesi rave kuisa mari, kuvimba nekufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji, ichikurudzira kuvandudzwa kwemaketani epamusoro uye akasimba-simba, uye ichigara ichisangana nezvinodiwa zvemisika yekunze neyekunze.
Scientific manejimendi yekumberi kugadzira
Mukuita kwekushandisa ISO9000 mhando sisitimu, emabhizinesi zvishoma nezvishoma akaumba akajairwa nesainzi emhando yepamusoro manejimendi magwaro, akasimbisa iyo yese maitiro mhando yekudzora sisitimu inotarisana nekudzivirira, yakagadzira mashandiro ekuenderera kwekuvandudza uye kunaka kutenderera, uye zvishoma nezvishoma kuvandudzwa kwechigadzirwa mhando. Iyo fekitori ine yakakwana michina, yemhando yepamusoro tekinoroji, yakakwana mhando manejimendi sisitimu uye yakazara kuyedza nzira. Batch yemitsara yekugadzira, mashandiro matsva uye matekinoroji matsva ane hunyanzvi hwepamberi pamba nekune dzimwe nyika akaunzwa kana kuvakwa zvakateerana, kusanganisira mesh bhandi inoenderera nekupisa yekurapa yekugadzira tambo, inoshandura inoshandura gasi carburizing, kabhoniitriding yekugadzira tambo, ketani ndiro phosphating yekugadzira mutsara, oiling mutsetse, cheni ndiro yakapfurwa ichenura uye cheni pre kudhirowa.
Tiri kufara kwazvo kukura pamwechete newe mukubatana kwenguva refu kubva pakusanzwisisika kusvika pakujairana, kubva pakujairana kusvika pakuvimba .———— William
Chain Inotyairwa Midhudhudhu, Nemazvo Roller Chain, Midhudhudhu Dhiraina Cheni, Kurudyi Rutivi Cheni Dhiraivha Mudhudhudhu, yakanakisa mudhudhudhu kutyaira cheni, Pfupi Pitch Precision Roller Maketani,